के सेतो दागको उपचार सम्भव छ ? जानी राखौँ – Etajakhabar
के सेतो दागको उपचार सम्भव छ ? जानी राखौँ
ताजा खबर :- सेतो दाग(vitaligo) कसैलाई पनि कुनै पनि समय हुनसक्छ । यस रोगमा शरीरको कुनै विशेष भागको पिग्मेन्टेशन अर्थात् प्राकृतिक रंग नष्ट हुन्छ र त्यहाँ सेतो दाग उत्पन्न हुन्छ । यी दाग कपाल र मुखको भित्र पनि हुनसक्छ । छालामा रंग ल्याउने मेलानिनको निर्माण गर्ने सेल्स कमजोर वा नष्ट हुनुको कारण यस्तो हुन्छ । कयौँ पटक शरीरको इम्यून सिस्टम पनि ओभर रिएक्टिभ हुन्छ र मेलानिन निर्माण गर्ने सेल्सलाई नष्ट गर्न थाल्छ । एलोपेथीका अनुसार, सेतो दागको उपचार सम्भव हुँदैन । हुनत: आयुर्वेदमा कयौँ उपाय यसको उपचारको लागि चर्चा गरिएको छ । यिनै आयुर्वेदिक उपाय मध्य एक हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ ।
सेतो दागको आयुर्वेदिक उपाय
यो आयुर्वेदिक उपाय प्रयोग गर्ने क्रममा नून, खुर्सानी, फ्रायड फूड, मासु, माछा, रक्सी, चुरोट सेवन गर्नुहुँदैन । यसलाई प्रयोग गर्ने क्रममा यसको साथमा कुनै राम्रो आयुर्वेदिक ब्लड प्यूरिफायर पनि पिउनु पर्दछ । यसको प्रयोगको सफलताका लागि आवश्यक हुन्छ कि एक गिलास लौकीको जूसमा तुलसीको ११ पात र पुदिनाको ११ पात मिलाएर कम्तीमा १५ दिन सम्म पिउनुपर्दछ ।
सेतो दागको आयुर्वेदिक उपचार
बावची – ५० ग्राम
नारियलको तेल – १००ml
नौसादर (अमोनियम नीरेय)– २५gm
-बावचीलाई मसिनो पिसेर पाउडर बनाउनुहोस्।
-नारियल तेलमा नौसादर (अमोनियम नीरेय) मिलाएर राख्नुहोस्।
रातीमा एक चम्मच बावचीको पाउडर पानीमा भिजाउनुहोस् । बिहान उठेर बावचीको एक चम्मच पाउडर पानीको साथमा नास्ता गरिसकेको एक घण्टा पछि कुल्ला गर्नुहोस् । यसपछि नौसादर (अमोनियम नीरेय) युक्त तेललाई दाग भएको ठाउँमा लगाउनुहोस् । र यस तेलको ठाउँमा राती भिजाएर राखिएको बावचीको पाउडर लगाउनुहोस् । एक हप्ता सम्म दिनहुँ बिहान यो काम गर्नुहोस् ।
दोस्रो हप्तामा यो पाउडर दुई चम्मच दिनहुँ बिहान-साँझ खानुहोस् । तेल र पाउडर मात्र बिहानको समय लगाउनुहोस् ।
यदि १५ दिन अर्थात् दुई हप्ताको अवधिमा सेतो दागमा मसिनो बिन्दु बनेको छैन भने सम्झिनु कि फाइदा भएको छैन । यसपछि यो प्रयोग बन्द गर्नुहोस् । यदि बिन्दु बन्छ र बिस्तारै-बिस्तारै ठूलो हुँदै छ भने केही दिनमै यो सेतो दागलाई ढाकेर नष्ट गर्छ ।
ओठ, परेला, हात, पैताला र भित्री अंगको लागि यो औषधी सामन्यतय काम गर्दैन । दस वर्ष भन्दा अधिक उमेरको मानिसले यसको प्रयोग गर्नुहोस् । तेल र बावचीको पाउडर दाग भएको ठाउँमा लगाउनुहोस् तर वरिपरीको छालामा लगाउनु हुँदैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २२, २०७४ समय: १५:०१:१८